प्रति भ्रमण पृष्ठ बढाउनुहोस् र बाउन्स दरहरू घटाउनुहोस् Martech Zone
प्रति भ्रमण पृष्ठ बढाउनुहोस् र बाउन्स दरहरू घटाउनुहोस्
शनिबार, मार्च 20, 2010 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यस्तो देखिन्छ कि मैले धेरै कम्पनीहरूसँग काम गरेको छु जुन प्रति भ्रमण पृष्ठहरू हेर्दा र बाउन्स दरहरू घटाउँदा हो। किनकि यो त्यस्तो राम्रो चिनिएको मेट्रिक हो, म धेरै कम्पनीहरूले आफ्नो अनलाइन निर्देशकहरूको लागि लक्ष्य राखेको देख्छु सुधार उनीहरु। म यसलाई सल्लाह दिन्दैन र म कम नै ख्याल राख्छु कि मेरो बाउन्स दर eight० प्रतिशत भन्दा बढि हो।
सायद मैले देखेको सबैभन्दा रमाईलो प्रतिक्रिया भनेको उनीहरूको पृष्ठहरू वा ब्लग पोष्टहरू भ breaking्ग गर्ने मानिसहरूलाई हो ताकि लेख पढ्न पूरा गर्न अर्को पृष्ठमा जारी राख्नको लागि मानिसहरूले लिंक क्लिक गर्नुपर्दछ। यो विज्ञापन द्वारा भुक्तान गरिएको साइटहरुमा पनि सामान्य छ। अधिक पृष्ठ दृश्यहरूले अधिक राजस्व र अधिक विज्ञापनको बराबरी गर्न सक्दछ।
निश्चित रूपमा, प्रति भिजिट पृष्ठहरू बढ्दछ र बाउन्स दरहरू घट्छन् - कुनै फरक पर्दैन कि रूपान्तरण पनि ड्रप हुन्छ, यद्यपि पाठकहरू रिसाउँछन् उनीहरू खोजिरहेका सामग्रीमा पुग्न सक्दैनन्।
यदि तपाईं इमान्दारीपूर्वक प्रति भ्रमण पृष्ठ बढाउन र बाउन्स दरहरू घटाउन चाहानुहुन्छ भने, म निम्न सिफारिस गर्दछु:
तपाइँको पृष्ठ पढ्न सजिलो बनाउनुहोस्! Pithy, अत्यधिक बाध्यकारी सामग्री लेख्नुहोस् जुन उपयोग गर्दछ हेडिंग, उपशीर्षक, बुलेटेड सूची, क्रमांकित सूचि, र बोल्ड सर्तहरू प्रभावकारी रूपमा। यसले व्यक्तिलाई तपाईंको पोष्ट सजिलो पचाउन अनुमति दिन्छ र निर्णय गर्दछ कि तिनीहरू अझ डुबुल्की मार्न चाहन्छन् वा गर्दैनन्। पाठको विशाल पृष्ठमा अवतरण भनेको एक निश्चित मार्ग हो जुन मानिसहरूलाई बाउन्स गर्न बनाउँछ।
तपाईका आगन्तुकहरुलाई विकल्पको साथ प्रदान गर्नुहोस्! तपाइँको सामग्री सँगसँगै सम्बन्धित सामग्री। सम्बन्धित पोष्टहरू, पृष्ठहरू, वा तपाईंको सामग्रीको साथ कार्यहरूमा कल गरेर, तपाईं आफ्ना पाठकहरूको लागि पूरै बाउन्स गर्नु भन्दा केही थप विकल्पहरू प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। WordPress को लागी, म WordPress सम्बन्धी पोष्ट प्लगइन प्रयोग गर्छु। यो धेरै सहि छ।
व्यक्तिगत रूपमा, म विश्वास गर्दछु कि बाउन्स दरहरू र प्रति भ्रमण पृष्ठहरू उनीहरूको अनलाइन मार्केटिंग सफलता मापन गर्नका लागि हास्यास्पद मेट्रिक हो। जबसम्म तपाईं पृष्ठदृश्यहरूसँग रूपान्तरण बीच कुनै प्रकारको सम्बन्ध प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ, मानिसहरूले किन तपाईंको देखभाल गर्दछन् यदि मानिसहरूले तपाईंको साइट र बाउन्स फेला पारे भने? हुनसक्छ तिनीहरू सहि आगन्तुक थिएनन्? सायद तपाइँको साइट एक अप्रासंगिक खोजशब्द को लागी एक उच्च खोज परिणाम मा चोट छ। के तपाइँ त्यसको लागी तपाइँको मार्केटि team टोलीलाई दण्ड दिदै हुनुहुन्छ?
एक व्यवसायको रूपमा, तपाइँको वेब साइट वा ब्लगले नयाँ लीडहरू ड्राइभ गरिरहेको हुनुपर्दछ, हालको ग्राहकहरुलाई कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, वा तपाइँको उद्योगमा तपाईलाई अधिकार सिर्जना गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ (जसले नयाँ नेतृत्व दिन्छ र ग्राहकहरुलाई कायम राख्न मद्दत गर्दछ)। रूपान्तरणहरू तपाईंको मेट्रिक हुनुपर्छ! प्रति भ्रमण पृष्ठ वा बाउन्स दरहरू होइन। म खुसी छु यदि मेरो ग्राहकहरु मेरो साइट मा अवतरण, संपर्क फारम, र बाउन्स फेला पार्नुहोस्!
PS: यदि तपाईं वेब प्रकाशन हो र तपाईंको पैसा विज्ञापन राजस्वबाट आयो भने, तपाईं बाउन्स दरहरू र प्रति भ्रमण पृष्ठहरूको बारेमा चिन्ता गर्न चाहानुहुन्छ किनकि यो गर्छ तपाइँको साइट को राजस्व मा सीधा संबंध। म कम्पनीहरू र उनीहरूको साइटहरूको बारेमा कडाईका साथ बोल्दै छु।
टैग: बाउन्स दरपृष्ठ प्रति भ्रमण वृद्धि गर्नुहोस्पृष्ठ प्रति भ्रमणबाउन्स दरहरू घटाउनुहोस्
विज्ञापन मालवेयर शिकार नहुनुहोस्
मार्स 22, 2010 मा 10: 35 एएम
राम्रो पढियो, साझा गर्नुभएकोमा धन्यवाद डगलस!
कुन कुराले साइटहरूलाई लामो समयसम्म रहन अझ आकर्षक बनाउँछ भनेको उनीहरूलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु र उनीहरूलाई सकेसम्म सजिलो दिन सक्षम हुनु हो। यसले निश्चित रूपमा रूपान्तरण बढाउनेछ! उनीहरू त्यहाँ पुग्दा जति सजिलो हुन्छ, त्यति नै सजिलो उनीहरूले आफूले खोजेको कुरा फेला पार्छन् र उनीहरूले अर्को पटक तपाईँमाथि भरोसा गर्नेछन्!